"Ketotifen": निर्देशन, analogs, contraindications
आज, शायद, त्यहाँ छैन अप्रिय शब्द "एलर्जी" परिचित गर्ने कुनै व्यक्ति छ। धेरै निर्धारित एलर्जी दबाइहरु। सबैभन्दा लोकप्रिय को एक ketotifen छ। यो निर्देशन यो उत्पादन मस्तूल सेल झिल्ली को एक stabilizer छ भनी उल्लेख।
यो कस्तो अर्थ राख्छ? हामी सादा भाषा बोल्न भने, दबाइ "Ketotifen" को को निर्धारण कम सेल झिल्ली सक्रिय पदार्थ (leukotrienes, histamine) को, को एयरवेज मा eosinophils को संग्रह रोक्छ। यो ब्रोन्कियल अस्थमा र अन्य एलर्जी प्रतिक्रिया तीव्र प्रकारको आक्रमण को घटना रोक्न, यो सास गर्न सजिलो बनाउँछ घास ज्वरो, तीव्र वा पुरानो urticaria। दबाइ ब्लक अत्यधिक विस्तार र bronchi को hyperactivity। Ketotifen एलर्जी conjunctivitis को लक्षण राहत लागि नेत्र विज्ञान प्रयोग
कि हानिकारक ketotifen? पुस्तिका उहाँले पूर्णतया पनि कलेजो मार्फत प्रारम्भिक खण्डमा, आधा द्वारा metabolized मा पेट मा पचा लिया जान्छ, र त्यसपछि कि, भन्नुभयो। शरीर बाट यो अन्तस्करणले द्वारा, 70% द्वारा 48 घण्टा भित्र उत्सर्जित हुँदा रगत प्लाज्मा यसको अधिकतम संग्रह - 2-4 घण्टा पछि। यस मामला मा, दबाइ को दर खाना सेवन असर गर्दैन।
"Ketotifen" मार्गदर्शन यस बारे चेतावनी दबाइ, गर्भावस्था वा व्यक्तिगत घृणाको मा contraindicated छ। यसलाई लिएर मान्छे, तपाईं निदाउरोपनको, ढिलो प्रतिक्रिया, चक्कर आना हुन सक्छ। जब प्रयोग घटेको खुजली sensations वा सक्छ "सुक्खा आँखा।" कहिलेकाहीं photophobia वा petechiae (gemmoragii) छ। सामान्यतया यी साइड इफेक्ट डाक्टर को हस्तक्षेप बिना टाढा जाने। तर, हामी निर्माता ketotifen कि सम्झना गर्नुपर्छ, यो ड्राइभमा सिफारिस गरिएको छैन, सटीक नियन्त्रण संयन्त्र वा प्रक्रियाहरु,
कार्य ketotifen नाटकीय sedatives, रक्सी, अन्य antihistamines को प्रभाव बढ्छ।
यो औषधीले रोगी पहिले नै मधुमेह, अस्थमा लागि लागूपदार्थ पिउने यदि ठूलो सावधानी प्रयोग गर्न आवश्यक छ। यस मामला मा, त्यहाँ केही अवसर प्रतिक्रिया आउन सक्छ।
तपाईं एक पटक फेरि चिरपरिचित सत्य आफूलाई स्थापित गर्न सक्छन्, सबै माथि सारांश: लिन ketotifen उहाँलाई डोऱ्याइअनुसार अन्य लागूपदार्थको जस्तै जोड, यो मात्र चिकित्सकको सल्लाह मा सम्भव छ।
यो ketotifen बच्चाहरु नियुक्त गर्न सम्भव छ? समीक्षा व्यवसायीक बच्चाहरु मा दबाइ को सकारात्मक प्रभाव देखाउँछ। मात्र ध्यान दिएर सही खुराक चयन गर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, छ महिना तीन वर्ष देखि बच्चाहरु मात्र 0.05 मिलीग्राम / किलो शरीरको वजन लागि दुई पटक एक दिन निर्धारित छ। तीन वर्ष, वयस्क र वृद्ध भन्दा पुरानो बच्चाहरु 1 मिलीग्राम मा सधैं खाने को प्रक्रिया मा दुई पटक एक दिन सिफारिस गरिएको छ।
कहिलेकाहीं ketotifen गर्न प्रतिक्रिया, निर्देशन साथै यस बारे, यस्तो चेतावनी दिन्छ एक व्यक्ति थाल्छ कि त गम्भीर छ "जाँदा निद्रामा।" यस मामला मा, यो डाक्टर सिफारिस स्तर तिनीहरूलाई ल्याउन, न्यूनतम खुराक संग दबाइ लिएर बिस्तारै सुरु गर्न सिफारिस गरिएको छ।
फेरि एक पटक म दबाइ को insidiousness जोड गर्न चाहन्छौं। ठीक चयन मात्रा मा चाँडै एलर्जी लक्षण relieves। तर घातक अधिमात्रा। यसको लक्षण एक अनूठा निदाउरोपनको, अन्योल छन्। रोगी अक्सर त्यो hallucinate थाल्छ, आफ्नो वातावरण सजग छैन। कहिलेकाहीं convulsions विशेष गरी बच्चाहरु मा, हुन सक्छ। irritability आउँछ। पछि दबाव plummets, tachycardia सुरु हुन्छ। समय अधिमात्रा मा सहयोग उपलब्ध छैन भने, व्यक्ति मृत्यु मा प्रवाह गर्न, एक coma मा पर्छ।
मात्र Allergist सही पाउन सक्नुहुन्छ एलर्जी लागि दबाइ र यसको औषधिको खुराक गणना।
औषधि analogues "Ketotifen" ड्रग्स "Zaditen", "स्टाफ", "Ketof", "Frenasma", "Positano" छन्। तिनीहरूलाई मा "Ketotifen" आधारभूत सक्रिय एजेन्ट को तयारी मा जस्तै तरिका ketotifen fumarate छ।
औषधि "Atropine"। प्रयोगको लागि निर्देशन
Protivodepressivny तयारी "Anafranil": प्रयोगको लागि निर्देशन
औषधि "Melatonin"। प्रयोगको लागि निर्देशन
"Kagocel" वा "Ergoferon" - जो राम्रो छ? तुलना तयारी मूल्यांकन, प्रयोग
Omaron: पुस्तिका, समीक्षा, analogs
कुन "Tempalgin" बाट मद्दत गर्दछ? ट्याबलेट "टेम्पालगिन": प्रयोगको लागि निर्देशन
अचल सम्पत्ति मा कर: गणना को प्रक्रिया
राम्रो पुरानो आइपड फेरबदल। परिचालन निर्देश
तीन-चरण ट्रांसफर्मर बारेमा सबै कुरा
दुई मास्को मा लागि रोमान्टिक साँझ। मास्को मा दुई को लागि रोमान्टिक डिनर: सबै भन्दा राम्रो ठाउँ
मस्तिष्क आघात। यो अवस्थामा कस्तो मदत आवश्यक छ?
मशरूम रूस लाल बुक (फोटो) मा दर्ता। मास्को को लाल बुक, Nizhny Novgorod र वोरोनिश क्षेत्रहरु मा सूचीबद्ध दुर्लभ Fungi रूस,
आदम Taramov: जीवनी र परिवार प्रामाणिक चेचेन
ZIL 130 डम्प ट्रक: एक धनी इतिहास संग कार
किन सबैले जलजीवालय भ्रमण गर्नुपर्छ (मर्मान्स्क)
कक्षा सदस्यहरू को संरचनात्मक विशेषताहरु: को को वातावरण मा अनाज को "पेशा" के छ
Keneksi आगो2स्मार्टफोन: एक समीक्षा, समीक्षा र सुविधाहरू